साबित्री थापाः एउटा चुपचाप संघर्ष |
प्रकाशित मिति :2020-04-04 13:07:38
सावित्री थापा, नेपालको महिला आन्दोलनमा एक हस्ताक्षर । पचास वर्षदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील उनी केही गर्न चाहानेका लागि प्रेरणाकी प्रतिमूर्ति पनि ।
महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्कन पाउन कहाँ सम्भव थियो र, त्यो बेला । महिलाले उच्च शिक्षा हासिल गर्नुलाई ठूलै उपलब्धी मानिन्थ्यो । छोरीलाई पढाउदै नपढाउने त्यो बेलामा आफ्नो नाम लेख्न सिके त भैहाल्यो नि भनिन्थ्यो । केही गरेर महिलाहरूले पढे भने दिउँसोको जागिर गर्नसम्म छुट हुन्थ्यो । अनि त्यस्तो जमानामा एउटा महिलालाई सामाजिक क्षेत्र रोज्नु सहज थियो होला त ? अहँ फलामकै चिउरा चपाउनुसरह भन्दा हुने ।
छोरी भनेको अर्काकै घरको भित्ता टाल्ने जात हो भन्ने सामाजिक मान्यताका बावजुद पनि साबित्रीलेचाहिँ पढ्न पाइन् । त्यसर्थमा उनी निकै भाग्यमानी महिला । त्यसका लागि बुबाको साथ र हौसला महत्वपूर्ण रह्यो । जसले गर्दा उनलाई सामाजिक क्षेत्रमा आउन सहज भयो ।
वि.स. २००९ सालमा पहिलोपटक नगरपालिका गठन भएपछि बुबा गोविन्दहरी जङ्गम भक्तपुर जिल्लाको पहिलो नगर प्रमुख भए । आमा जमुना जङ्गमचाहिँ गृहिणी । दुई आमामध्ये साबित्रीचाहिँ जेठीपट्टीको पहिलो सन्तान । १० जना दाजुभाई । त्यसैले उनले सानै उमेरमा ठूलो जिम्मेवारी ब्यहोर्नु पर्यो ।
६० वर्ष अघि काठमाडौं उपत्यकामा आजको जस्तो धुलो र धुवाँ थिएन, शान्त गाउँ जस्तै थियो काठमाडौं । घरहरू निकै पातला थिए । पुसको महिनामा पुरै हिउँ पर्ने । सिंहदरबार वरिपरी खेतैखेत । बाटो वरिपरी लहरै रोपिएका रुखहरूले साँच्चिकै सुन्दर देखिन्थ्यो काठमाडौं । सडकमा हिँड्दा बेग्लै आनन्द । बानेश्वरबाट डिल्लीबजार पढ्न आउदा खेतको आलीको गोरेटो बाटो हुँदै आउनु जानु पथ्र्यो । सडकमा एकदमै पातला, त्यो पनि राणा र शाहहरूका मात्र मोटर देखिन्थे । रेडियो त हुने खानेको घरमा मात्रै । यो, त्यो बेलाको कुरा हो जुनबेला साबित्री थापा भक्तपुरबाट उच्च शिक्षाको निम्ति काठमाडौं बानेश्वरको घरमा आईन्, जहाँ उनकी कान्छी आमा बस्थिन् । भक्तपुरबाट काठमाडौं आउन दिन बित्थ्यो । थापा पढ्नकै लागि आएकी थिईन्, काठमाडौं ।
भाईमध्ये भरत जङ्गम उनको मिल्ने साथी । अर्को भाई दिपक जङ्गम पनि नेपालको नाम चलेकै संगीतकार । श्रीमान् भोलामानसिंह थापा जमानाको राजनीतिज्ञ । पछि बन मन्त्रीसम्म भए । दुई सन्तान छोरा सुदिपसिंह थापा र छोरी भावना थापा दुबै व्यवस्थित छन् । दुबैतिर गरेर चार नातिनातिना ।
२०२० सालमा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेपछि २०३६ सालमा कानूनतर्फ स्नातक गरिन् थापाले । २०१८ देखि २० सालसम्म राजनीति शास्त्र संघ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव छ उनीसँग । थापाले राजनीति शास्त्रमा एम.ए गर्दा नेपालमा औलामा मात्र गन्न सकिने महिलाहरू थिए । त्यसमा पनि कम उमेरमा एम.ए पास गर्ने थापा नै पहिलो महिला हुन् ।
कलेज पढ्न आउदा जाँदा फलानाको छोरी हो भनेर नचिन्ने त अत्यन्तै कम थिए । २० सालपछि २०३६ सालमा कानूनतर्फ त्रि.बि बाट स्नातक गरिसक्दा उच्च पदमा आउन सरकारले गरेको आग्रहलाई पटकपटक लत्याइन् उनले । बरु सामाजिक क्षेत्रमा लागिन् । यो निर्णय आफैसँगको निकै ठूलो च्यालेन्ज थियो । सरकारी सेवामा गएको भए आज नेपालको पहिलो सचिव थापा नै हुने थिईन् । यो कुराचाहिँ उनले भनेकी होइनन्, उनकी समकालिन् साथी अग्रणी महिला अधिकारकर्मी तथा नेता कमल राणाले भनेकी हुन् ।
थापा भन्छिन् “तर केही गुनासो छैन । जरुरी त्यो बेला महिलाकै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थियो ।” करिअरको सुरुका दिन साझामा वेलफेयर अफिसर हुँदै साझा स्वास्थ सेवा प्रालिको महाप्रबन्धक भइन् (२०३७ देखि ४२ सम्म) उनी । उनकै संलग्नतामा तत्कालिन गृह पञ्चायत मन्त्रालय अन्तरगत समाज कल्याण शाखा स्थापना भयो । जसको प्रमुख थापा भइन् । सोही शाखा पछि आएर महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा परिणत भयो ।
यस्तै शरणार्थी बसोबास, दैवी प्रकोप तथा उद्वार कार्यक्रम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रमुखमा रहेर काम गरेका अनेकौ अनुभव छन् उनीसँग । उहाँकै पालामा बसेका तिब्बती शरणार्थी अहिले पनि एकान्तकुनामा छन् । त्यस्तै साझा केन्द्रीय बोर्डमा २०४२ देखि ४८ सम्म पहिलो महिलासदस्य सचिवको रुपमा काम गरिन् । महिला तथा बिकास केन्द्रमा २०३८ सम्म संस्थापक संचालक तथा कार्यकारी निर्देशक र २०५४ देखि २०५८ सम्म महिला बाल तथा सामुदायिक विकास केन्द्रमा अध्यक्ष लगायत अन्य धेरै संस्थामार्फत सामाजिक क्षेत्रहरूमा उनले पुर्याएको योगदान र संघर्षका कथा आज पनि गुमनाम छ ।
महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेकै कारण उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका विभिन्न गोष्ठि तथा सेमिनारहरूमा पनि भाग लिने अवसर पाइन् । यस क्रममा उनी अमेरिका, हङकङ, पोल्याण्ड, श्रीलंका, इण्डोनेसिया, बंगलादेश, पाकिस्तान र भारत लगायत दर्जनौं देश पुगिसकेकी छन् ।
अंगुरबाबा जोशी, कमल राणा, सहाना प्रधान लगायत अग्रणी महिलासँगको लामो सहकार्यको अनुभव पनि छ उनीसँग । अत्यन्तै शान्त स्वभाव र मिलनसार व्यवहारकी थापा साहित्यमा पनि कलम चलाउँछिन् । उनका कविता संग्रह, संस्मरण लगायत नौ ओटा कृति प्रकाशित भइसकेका छन् । ति कृतिको ईतिहासमा कुनै दिन पक्कै मुल्यांकन होला ।
भगवत् गीतामाथी आफ्नै विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति र पुनरव्याख्यासहित त्रिवेणी खन्डकाव्य पनि लेखेकी छिन् उनले । “हामी जुन समयमा यो क्षेत्रमा आयौं, उसबेला विश्वमा नै महिलाको सरोकारको मुद्दालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती थियो । अहिलेजस्तो डोनर र अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरू थिएनन् । हामीले काम गर्दा ईच्छा शक्तीको बलमा काम गथ्र्यौ । धेरै ठूलो ईनर्जी थियो”, उनले विगत सम्झिइन् ।
उनको बुझाइमा यो पाँच दशकमा आएको सबै भन्दा ठूलो परिवर्तन छोरीलाई समान शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो । यो जागरणप्रति जति नै धन्यवाद भन्दा पनि कम हुने उनी बताउँछिन् । “हामीले थालेको अभियानको सबै भन्दा ठूलो सफलता यही होˮ उनले भनिन्, “अब अर्को चरणको सफलता प्राप्तिको निम्ति अग्रणी महिलाहरू पार्टी र दल भन्दा माथि उठेर महिलाको मुद्दामा एक भए परिमाण अझै छिटो र उत्कृष्ट आउछ ।ˮ यो समय महिलाले काम गरेर आफ्नो क्षमता देखाउने हो भन्छिन्, उनी । “संसारभरि अबको युद्व महिला र पुरुषबीचको असमान शक्ती सन्तुलनबीच हुनेछ, महिला माथी भएको विभेदका विरुद्ध हुनेछ” थापाले भनिन् ।
थापा शान्ति आश्रम, जेष्ठ नागरिक सेवा संस्थानको संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक हुन् । हाल महिला सुरक्षा दवाब समूहको अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिरहेकी थापामा यो उमेरमा पनि त्यतिकै जोश छ, जागर छ । ७६ वर्षको उमेरमा पनि अनुहारमा चमक र शरीरमा उर्जा हुनुको रहस्य के त ? उनले प्रष्ट्याइन्, “हरेक बिहान एक घन्टा पूजापाठ गर्छु । सकारात्मक विचार बोकेकी छु । यसले मान्छेलाई तनाबमुक्त बनाउछ ।ˮ
देश र समाजका लागि यति धेरै भूमिका अनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी साबित्रीले आफ्ना लागिचाहिँ कसैसँग केही मागिनन् त ? प्रश्न खस्न नपाउँदै उनले सम्झिइन्, “मलाई न पद चाहिएको, न पावर । अनि किन माग्नु ?ˮ उनले उल्टै प्रश्न छोडिन् ।
महिला अधिकारको क्षेत्रमा यति लामो समयदेखि काम गरिरहेकी उनी महिला तथा बालिकामाथि भइरहेका बलात्कारका घटना सुन्दा हृदयबाटै दुःखी हुन्छिन् । “अझ बालिकामाथीको बलात्कार सुन्दा त धेरै डिस्टब हुन्छु । यो भन्दा विभत्स घटना अरु के हुन सक्छ र ?” प्रश्नसहित केही पल मौन रहिन् उनी ।
६ वर्षकी बालिका बलात्कारको घटनाले जन्माएको हो, महिला सुरक्षा दवाव समूहलाई । सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार, जनसंख्याको आधारमा राजनीतिमा महिला सहभागिता, सत्ता संरचना र निर्णायक तहमा महिला सहभागिता हुनैपर्छ भन्ने दवाव समूहका प्रमुख एजेन्डा थिए । यी मध्ये केही त कार्यान्वयन पनि भए । “म जिउँदै हुँदा यी सब देख्न पाएँ, निकै खुशी छुˮ उनको अनुहारका खुशीमा रेखाहरू देखिए ।
देश र समाजका लागि यति धेरै भूमिका अनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी साबित्रीले आफ्ना लागिचाहिँ कसैसँग केही मागिनन् त ? प्रश्न खस्न नपाउँदै उनले सम्झिइन्, “मलाई न पद चाहिएको, न पावर । अनि किन माग्नु ?ˮ उनले उल्टै प्रश्न छोडिन् । तर परिवारको सहयोगचाहिँ उनलाई मिलेकै हो, जुन संजोग भन्नुपर्छ । उबेला पनि घरमै पढाउने मास्टर थिए उनलाई । तर त्यो बेलाका छोरीहरू उनीजस्तै भाग्यमानी त कहाँ हुनु र ? कसमेत चिन्न पाउदैनथे ।
छोराछोरी हुर्काउदै, घर व्यवहार एक्लैले थामिन् । अहिले श्रीमान्लाई अल्जाईमर (बिर्सने रोग) छ । सेन्सलेस भएकै नौ वर्ष भयो । आफ्नै शरीरलाई साथ र सहयोग चाहिने यो उमेरमा अर्को एउटा ज्यानका लागि खटिरहनु पर्दाको विवशता उनैलाई थाहा होला । तर पनि जीवनसाथीको पीडालाई आत्मसात गरेकी उनले कुनै खालको झर्को व्यक्त गरिनन् ।
दुःख नदेखाउने, सधैं हाँसिरहने साबित्रीलेचाहिँ कहिल्यै दुःख भोगिनन् त ? जिज्ञासामा उनले थपिन्, “त्यस्तो त कहाँ सम्भव हुनु र । मेरो जीवन पनि राजकुमारीको लोक कथाभन्दा त कहाँ कम छ र ? कतिपय कुराहरू भने मान्छेले मरेर जाँदा सँगै लिएर जानुपर्दोरहेछ ।” यसो भनिरहँदा उनी गम्भीर त देखिइन् । तर पनि अनुहार भने भ्रममुक्त थियो । (पुनः प्रकाशित)